Iyo 3GB ye RAM mune iyo iPhone 7 Plus inoita kunge inosimbiswa | IPhone nhau
Iyo 3GB ye RAM inosimbiswa muiyo iPhone 7 Plus
Aya ndiwo akajairwa data ayo Tim Cook asingade kutipa isu panguva yeKeynote, iyo inoguma ichikonzera kufarira kwakawanda sezvo mazuva anoenda. Izvo zvakatomboitika kwatiri neiyo iPhone 6s, iyo inoshamisa ye RAM ndangariro, uye kunyangwe iine 2GB iyo iPhone inoita kunge yasara, ne1GB yaive yatanga kuperevedza. MuCupertino vanga vachida kuramba vachiwedzera, uye ndizvo Zvinoenderana neazvino ongororo, iyo iPhone 7 Plus yaizove ichipa RAM inosvika ku3GB. Izvi zvine musoro, kunyanya kana isu tichifunga kuti iyo iPhone 7 Plus inogona kunge yakagadzirirwa imwe nzvimbo yehunyanzvi.
Muzvinyorwa zvakapfuura hatina kuwana mutsauko mu RAM pakati peiyo hombe uye diki vhezheni yeiyo iPhone, asi Apple yakaona zvakakodzera kuzviita neiyo iPhone 7. Kana pamwe yakajairwa iPhone 7 kana ichisanganisira 3 GB ye RAM, iyo chinhu chatisati taziva chokwadi, kunyangwe midhiya yakawanda ichirasa. Icho chikonzero hachigone kungove nekuda kwechisarudzo, hazvo iPhone 7 inopa HD resolution uye iPhone 7 Plus FullHD resolutionIchokwadi kuti hauzodi 1GB zvimwe kumhanyisa sisitimu yekushandisa. Nekudaro, Apple haina kutaura nezve mashandiro eDhizaini kiyi muKeynote, uye zviri pachena kuti chishandiso chine 3GB ye RAM chichaita zvirinani mune dzimwe nzira pane ye2GB imwe. Iyi data yatinowona mumusoro wemufananidzo inouya kubva kuGeekbench pane iPhone 7 Plus.
Muchidimbu, gakava rekuti ingani RAM inoda chishandiso cheIOS rinovhurwa, nekuti if paigara paine kutaura nezvekuti iOS inokwanisa sei RAMNhasi tinofanirwa kutaura kuti iyo Plus modhi ine 3GB, chete 1GB isingasviki mamodheru senge iyo Samsung Galaxy S7 Edge, saka pamwe vashandisi veiyo iPhone iyo iine 1GB ye RAM chete inofanira kudedera, sezvazvakaita iPhone 6, kunyanya tichifunga kuti kunyange iyo iPhone SE ine 2GB ye RAM.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Iyo 3GB ye RAM inosimbiswa muiyo iPhone 7 Plus
Yangu 3GS ine 256MB uye kuti murume akashurikidzwa anoikanda sei!
IPhone 6s kesi hadzienderane ne iPhone 7
Iwo maAirPod matsva haazowira nyore senge ekare maParodhi